Cali Guudlaawe iyo Dabageed oo loo helay laba Malxiis oo ku tar tanto Doorashada Madaxadeed ee hirshabeele | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Cali Guudlaawe iyo Dabageed oo loo helay laba Malxiis oo ku tar...
Cali Guudlaawe iyo Dabageed oo loo helay laba Malxiis oo ku tar tanto Doorashada Madaxadeed ee hirshabeele
Diiwaan-galinta musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dowlad gobolleedka Hirshabelle ayaa maanta lagu soo gebagebeeyeym magaalada Jowhar.
Guddiga Doorashada ayaa u diiwaan-galiyay xilka Madaxweynaha labo musharax oo kala ah Cali Cabdullaahi Xuseen (Guudlaawe) iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan, halka madaxweyne ku-xigeenna ay isku soo taageen Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo Maxamed Maxamuud Cabdulle (Maxamed Dheere).
Shaki ku saabsan dib u dhac ku yimaada waqtigii ay doorashada u asteeyeen guddiga qaban-qaabada ayaa saaka soo baxay kaddib markii xilkii Madaxweynaha uu isku soo taagay Cali Guudlaawe oo kaliya.
Hase ahaatee shakigaas ayaa meesha ka baxay ka dib markii nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Jimcaale uu galabta isku diiwaan-galiyey inuu yahay murashax la tartami doona Guudlaawe, iyadoo musharaxan uu muuqdo mid malxiis ah oo uu wato Cali Guudlaawe si doorashada aysan dib ugu dhicin.
Maalinta Arbacada oo ku beegan 11-ka November ayaa lagu waddaa in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo aan xiise badan laheyn maadaama la sii ogyahay musharaxiinta ku soo baxaya oo ay gadaal ka riixeyso DF.
Previous articleShaqaalaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaliya, shalay iyo maanta Maamulka Hay’addaasi oo hurumar la taaban karo gaarsiiyay Sawiro..
Next articleWar deg deg ah Magaalooyinka Hargeysa iyo Burco oo Dowlada Farmaajo ka Aruurineysa Ergada soo xuleysa Xildhibaanada Soomaliya
Saa'ib Cariiqaat oo kamid ahaa siyaasiyiinta ugu caan Falastiin ayaa u geeriyooday cudurka Covid-19, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiin. Saa'ib oo 65 jir ahaa ayaa...